ကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒ - Meta
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒက သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ စုဆောင်း အသုံးပြုသည်၊ မျှဝေသည်ကို ရှင်းပြထားသည်။ ဝီကီမီဒီယာဆိုဒ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤမူဝါဒကို သဘောတူကြောင်း သင်လက်ခံသည်။
ဤသည်မှာ ဘာသာပြန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်း၏ တရားဝင်ဖော်ပြချက်အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူရင်းကို ကြည့်ပါ။.
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းသည် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ဝီကီပီးဒီးယား၊ ဝီကီမီဒီယာ ကွန်မွန်းစ် နှင့် ဝစ်ရှင်နရီ​ကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အခမဲ့ အသိပညာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
ဤမူဝါဒသည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့စုဆောင်း အသုံးပြုပုံ၊ မျှဝေပုံကို ရှင်းပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် အနည်းငယ်ကိုသာ ရယူသည်။
သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို တတိယလူများထံ ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
ဝီကီမီဒီယာဆိုဒ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤမူဝါဒကို သင်သဘောတူသည်ဟု မှတ်ယူသည်။
ဤကိုယ်ပိုင်ရေးရာ မူဝါဒက ဘာတွေကို လွှမ်းခြုံပြီး ဘာတွေ မလွှမ်းခြုံထားဘူးလဲ
ဤကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒထဲတွင် လွှမ်းခြုံထားသည့် နမူနာများ
ဘာသာစကား မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ဤကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒသည် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြလွှမ်းခြုံထားသည်မှာ
သင်၏ အများပြည်သူ ပံ့ပိုးမှုများ
လူသိရှင်ကြား မြင်နိုင်သော သတင်း အချက်အလက်
အကောင့် အချက်အလက်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း
GPSနှင့် အခြားတည်နေရာပြ နည်းပညာများ
ကျွန်ပ်တို့ အလိုအလျောက် လက်ခံရရှိနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်
ကျွန်ပ်တို့ စုဆောင်းထားသော သတင်း အချက်အလက်
ဒေသအလိုက် သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များအကြောင်း
သင့်ထံမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ အသုံးပြုသလဲ
သင်၏ သတင်းအချက်အလက်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖြန့်ဝေသလဲ?
အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းလွှဲပြောင်းခံရလျှင် (တကယ်မဖြစ်နိုင်ပါ)
သင်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားသူများကို ကာကွယ်ရန်
သင်က အများပြည်သူဆိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်
သင်၏အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ထားသလဲ?
သင်၏ ဒေတာများကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်မျှကာလကြာ သိမ်းဆည်းသလဲ?
ဖောင်ဒေးရှင်းက ဘယ်နေရာမှာလဲနှင့် ကျွန်ုပ်အတွက် ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ရသလဲ
ခြေရာမခံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုဖြင့် (DNT) အချက်ပြမှု
ဤမူဝါဒအား သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်ချက်ပေးသည့်ရက် အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိပြုလုပ် လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
Last edited on 24 December 2020, at 03:50